Ogaden News Agency (ONA) – Dhalinyaro Soomaali Ah oo Lagu Dilay Magaalada London.
Dhalinyaro Soomaali Ah oo Lagu Dilay Magaalada London.
Magaalada London ayaa lagu waramayaa in Labo Wiil oo Soomaali ah siyaasabo kala duwan loogu dilay halka mid kalena lagu dhaawacay.
Labada Wiil ayaa waxaa lagu dilay laba xaafad oo ka mid ah xaafadaha ku yaalla London, iyada oo dilkooda loo adeegsaday Mindi, sida ay sheegeen Soomaalida halkaasi ku dhaqan. Dhalinyaradan Soomaalida ah ayaa da’ahaan waxaa lagu qiyaasay in ta u dhaxaysa 18-sano ilaa 20-sano, waxaana sawirro laga soo qaaday ay muujinayeen jirkooda oo ku yaalla Mindida dilkooda loo adeegsaday.
Booliska magaalada London ayaa gaadhay goobta ay dilalku ka dhaceen, waxayna la wareegeen Meydadka Soomaalidii la dilay, baadhitaano horudhac ah oo ay sameeyeen Booliska ayaa waxa ay ku sheegeen dilalkan in ay geysteen koox budhcad ah. Warar madax banaan ayaa sheegaya dilalkan in ay ka dambeeyaan Burcad Madow ah oo watay Gaadhi, kuwaasi oo sida muuqata u aar gudayay Nin Madow ah oo Sabtidii ina dhaaftay lagu dilay magaalada London.
Labada Wiil ee la dilay mid ka mid ah ayaa walaalkiisa Afar bilood ka hor lagu dilay magaalada London, falkan waxaa si aad ah u cambaareeyay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Ingiriiska iyo ururada u dooda xuquuqda arrimaha bulshada, waxayna dalbadeen in cadaaladda la horkeeno ragii dilka geystay.